Good Sister-in-Law:Forbidden Love(2015) မြန်မာစာတန်းထိုး 18++++ - Movie Online
Good Sister-in-Law:Forbidden Love(2015) မြန်မာစာတန်းထိုး 18++++
2015, Erotic 18+, မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင်
အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာဘယ်ဟာကပိုပြီးအရေးကြီးပါသလဲ...တကယ့်အိမ်ထောင်ရေးတခုမှာမိသားစုဘဝသာယာလှပဖို့ကအရေးကြီးတာပါ..တကယ်လိုသာအဲ့ဒီအိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုမှ သားသမီးဆိုတဲ့အရာကို ခင်ပွန်းသည်ကမလုပ်ပေးနိုင်ရင် ဒါမှမဟုတ် ဆန့်ကျင်ဘက်အရာတစ်ခုကိုစိတ်ဝင်စားလို့မစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင် အဲ့ဒီအိမ်ထောင်ရေးကသာယာနိုင်ပါ့မလား..
အဲ့ဒီဆန့်ကျင်ဘက်အရာတစ်ခုကကော အဲ့ဒီအိမ်ထောင်ရေးကြားထဲကို ဘယ်လောက်အတိုင်းတာထိပတ်သက်ခဲ့ပါသလဲ....အိမ်ထောင်တခုမှာ သာယာဖို့ဆိုတာ မိန်းမဖြစ်သူကယောင်္ကျားဖြစ်သူကိုဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့ ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာအရေးကြီးဆုံးပါဘဲ..အဲ့လိုတွေမထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့လို့ ယောကျာင်္းကိုသိပ်ချစ်လို့ အလျော့ပေးခဲ့တဲ့အစ်မဖြစ်သူတစ်ယောက်နဲ့ အစ်မဖြစ်သူရဲ့ခင်ပွန်းသည် ခဲအိုဖြစ်သူနဲ့ တစ်အိမ်တည်းအတူနေကြတဲ့ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ အဓိကမင်းသမီးလေး အရမ်းချောတဲ့ဆရာဝန်ခယ်မလေးတို့ ဘယ်လိုသံယောဇဉ်တွေညှိတွယ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာကြလဲ...ဘယ်လိုမျိုး ရင်ခုန်စရာအရမ်းကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတွေဖြစ်လာကြသလဲ..ကဲပြောနေတာကြာပါတယ်ဗျာ အကြောင်းစုံသိချင်လို့ရှိရင် ဒီအိမ်ထောင်ရေးဆန်ဆန် 18+ ကားလေးကို မြန်မြန်သာဒေါင်းလိုက်ကြပါတော့...တခုတော့ဝန်ခံပါရစေ ဒီကားရဲ့ယောကျာင်္းလေးတွေအကြိုက်မင်းသမီးလေးကအရမ်းကိုချောတယ်ဆိုတာပါဘဲ ဟိဟိ ..
Watch And Download !!!
Credit :- Channelmyanmar
Labels: 2015, Erotic 18+, မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင်
Good Sister-in-Law:Forbidden Love(2015) မြန်မာစာတန်းထိုး 18++++ Reviewed by Ko Lin on July 07, 2016 Rating: 5
Videos with Sexy
A Wall Street broker is forced to evadeapolice chief investigatingabank robbery as he attempts to recover the stolen money in ex...
Love of married woman and young man Title: An Affair Friends Mother Year: 2017 Genre: Romance Rating: N/A Runtime:...
A young woman is dealing with anorexia. She meets an unconventional doctor who challenges her to face her condition and embrace li...
After the apes suffer unimaginable losses, Caesar wrestles with his darker instincts and begins his own mythic quest to avenge h...
2016 2017 2015 2014 2013 2012 3D 2008 2010 2003 2005 2009 2011 720p 2002 2004 2001 2006 2007 1985 1992 1974 1983 1986 1995 1998 1999 2000 1080p 1963 1964 1967 1971 1977 1982 1984 1987 1988 1996 1997
3D 720p Action Adventure Bollywood China Chinese Comedy Drama Erotic 18+ Fantasy Horror Indian James Bond Japan Korean Littleneo Live Channel Minions Sci-Fi Thailand Thriller TV Series USA Movie War WWE မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင် ဒေါင်းလုပ်မည့်သူများ ဖတ်ပေးပါ